बैकल ताल किन यति प्रसिद्ध छ? मौसम विज्ञान संग यसको सम्बन्ध | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जीवनमा धेरै पटक यो भनिन्छ कि वास्तविकता काल्पनिक भन्दा माथि छ। र यो प्रकृतिमा अविश्वसनीय वा धेरै विशेष सुन्दरता भएका ठाउँहरूको असाधारण घटनाहरू छन् किनभने तिनीहरूको विशेषताहरू, विदेशी वनस्पतिहरू र जीवजन्तु वा संसारमा अनौठो प्राकृतिक घटना तिनीहरूमा देखा पर्दछ।
यस मामला मा म कुरा गर्न जाँदैछु बैकल ताल। यो ताल धेरै कारणका लागि संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। वैज्ञानिकहरूको लागि यो ठूलो महत्त्वको छ र पर्यटकहरूको लागि पनि। के तपाई यो जान्न चाहानुहुन्छ किन यति महत्वपूर्ण छ र यो कत्ति अविश्वसनीय हुन सक्छ?
1 बैकल तालको उत्पत्ति र विशेषताहरू
2 बैकल तालको महत्व
3 बैकल तालको जिज्ञासा
4 बैकल तालमा पर्यटन
5 बैकल ताल र मौसम परिवर्तन
बैकल तालको उत्पत्ति र विशेषताहरू
यो तालको टेक्टोनिक मूल छ। यसको मतलव यो पृथ्वीमा रहेको टेक्टोनिक प्लेटहरूको चालले गर्दा भएको हो (टेक्टोनिक प्लेटहरूको बारेमा थप जान्न पृथ्वीको भित्री तहहरू पढ्नुहोस्)। यो रूसको साइबेरियाको दक्षिणी क्षेत्रमा उत्तर-पश्चिममा इर्कुत्स्क ओब्लास्ट र दक्षिणपूर्वमा बुरियाटिया बीच इर्कुट्स्क शहर नजिकै अवस्थित छ। यो को रूप मा परिचित छ "साइबेरियाको निलो आँखा" y "एशियाको पर्ल"।
बैकल तालको गठनको मिति अनुमान गरिएको छ करीव २-25--30० लाख वर्ष। भूगर्भीय हिसाबले हामी भन्न सक्दछौं कि हामीले इतिहासको सब भन्दा पुरानो ताल भेट्टाएनौं।
यस तालको महत्व यो हो कि यसलाई नाम दिइएको थियो १ 1996 XNUMX in मा युनेस्को द्वारा विश्व विरासत साइट। यो विश्वको सबैभन्दा कम बादल ताल हो (यसैले निलो आँखाको उपनाम)। टर्बिडिटी सेच्ची डिस्कहरु द्वारा मापन गरिएको छ। यी डिस्कहरूले हामीलाई पानीमा प्रवेश गर्ने प्रकाश विकिरणको मात्रा जान्न र यसरी चमक थाहा पाउन अनुमति दिन्छ। ठिक छ, प्रकाशको मात्रा जुन गहिराइमा पुग्छ मापन गरिएको छ र प्रकाश चिह्नहरू २० मिटर गहिरो दर्ता गरिएको छ।
यो ताल पनि वरपरको लागि बाहिर खडा छ यस ग्रहमा २०% ताजा, अप्ठ्यारो पानी (पानी को बारे मा २ 23.600०० किलोमिटर)। यसले धेरै पानी समात्न सक्दछ किनकि यो धेरै गहिरो छ र किनकि यसलाई3336 सहायक नदीहरूले खुवाउँछन्। बैकल तालको आयामहरू हुन्: Surface१,31.494 किलोमिटर सतह, 636 80 किलोमिटर लामो, km० किलोमिटर चौडा र १,1.680० मीटर गहिरो।
जमेको ताल बैकल। स्रोत: http://www.rusiamia.com/rusia/turismo/lago-baikal-rusia/
अर्को विशेषता जसले यसलाई यति खास बनाउँदछ कि त्यो एक्लो ताल मात्र हो जहाँ यसको अवशेष महाद्वीपको हिमनदीले असर गरेको छैन उच्च अक्षांश ताल हुँदाहुँदै पनि। झीलको तलछटमा अध्ययन गरिएको छ र अनुमान गरिएको छ कि यदि २ 25--30० वर्षमा जम्मा भएका सबै तलछटहरू हटाउन सकिन्छ भने, तालमा पुग्न सकिन्छ9किमी सम्मको गहिराई।
ताल पूरै पहाडहरूले घेरिएको छ (त्यसकारण यसमा यति धेरै तलछट छ भन्ने तथ्य छ) जुन यसको संरक्षणको लागि प्राविधिक रूपमा राष्ट्रिय पार्कको रूपमा सुरक्षित छ र यसमा करीव २२ वटा साना टापुहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो टापु ओल्खोन भनिन्छ र यो करिब 72२ किलोमिटर लामो छ।
बैकल तालको महत्व
यस तालमा मैले पहिले पनि भनेको छु, दुइटा दृष्टिकोणबाट ध्यान केन्द्रित गर्ने ठूलो महत्त्व रहेको छ: भ्रमण गर्ने र पर्यटन गर्ने ठाउँको रूपमा वा वैज्ञानिकहरूको रूपमा जहाँ तपाईंले यस विशेषलाई खास बनाउने अनुपम विशेषताहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
वैज्ञानिक समुदायको लागि यसलाई यत्तिको महत्त्वपूर्ण बनाउने पहिलो विशेषता भनेको यो छ कि एउटा एक्लो तालले सम्पूर्ण ग्रहको २०% ताजा पानी भण्डार राख्छ। घटना मा कि यसको 336 XNUMX सहायक सहायक नदाहरु पानी उपलब्ध गराउन र यसलाई खुवाउन बन्द गर्नुहोस्, तालले लिनेछ वाष्पीकरण प्रक्रिया मार्फत खाली 400 वर्ष। वैज्ञानिकहरूले गरेको सबैभन्दा अनौंठो गणनामा यो छ कि यदि सम्पूर्ण विश्व जनसंख्या यस तालले मात्र आपूर्ति गरेको भए उनीहरू they० वर्षसम्म बाँच्न सक्थे र पानीको अभावको समस्या हुने थिएन।
माथि उल्लेखित पानीको स्पष्टताले यसलाई विशेष बनाउँदछ। योसँग रहेको कम गम्भीरता भनेको यस तथ्यको कारण हो कि सूक्ष्मजीवहरू यसको पानीमा बस्दछन् पानीमा शुद्ध र एक राम्रो सफाई प्रदर्शन। केहि अध्ययनहरू यी सूक्ष्मजीवहरू उच्च पानी शुद्धिकरण दरका कारण अन्य पानीहरूमा तेल फैलिएमा सफा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्नका लागि गरिएको छ।
क्रिस्टल सफा पानी केही चिकित्सा उपचारहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ विशेष गरी केहि डाइटहरूका लागि जुन खनिज लवणमा कमजोर छ। प्राचीन समयमा एशियालीहरू बैकल ताललाई पवित्र स्थान मान्दथे। आज पनि तपाईं तालको छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ कि प्राचीन आदिवासीहरूले प्रयोग गर्ने भवनहरूको अवशेष तालको उर्जाको साथ लगानी गरिएको विधिहरू।
अर्को विशेषता जसले वैज्ञानिक समुदायलाई यती खास बनाउँछ चरम मौसम अवस्था जुन यो फेला पर्‍यो। जाडोमा ताल ताल तापक्रम माइनस degrees 45 डिग्री सम्म पुग्न सक्दछ। यद्यपि, बैकल ताल वनस्पति र जीव जन्तुहरूको लागि आश्रय हो। जनावरहरूको १,1.600०० जेनेरा र plants०० बोटबिरुवा मिलेका छन् जुन अहिलेसम्म अनुरूप छन्। यसमा असंख्य स्थानिक प्रजातिहरू छन् जस्तै मोहर र बैकल स्टर्जन, गोलमञ्जना माछा र एपिसुरा केकडा (एउटा सानो जनावर जसको भूमिका खाना श्रृंखलमा आधारभूत हो, किनकि यसले यसको शरीरमा पानी फिल्टर गर्दछ)। एपिसुराको भूमिका यति महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो एक प्रजाति हो जुन प्रशस्त मात्रामा भएको छ। त्यहाँ प्रति वर्ग मिटर सतह को यी करिब3मिलियन सम्म छन्। तिनीहरू धेरै सानो छन्, केवल २ मिलिमिटर लम्बाई, तर पानी फिल्टर गर्न तिनीहरूको क्षमता अविश्वसनीय छ। धेरै भागमा उनीहरूलाई धन्यवाद किन ताल यत्ति स्पष्ट छ। १2.1976 मा, लुगा बनाउने काममा रहेको एक कारखानाले यसको फोहोर सीधै बेकाल तालमा फ्याँक्यो यी खेकाहरू र अन्य स्थानिक प्रजातिको अस्तित्वलाई जोखिममा पार्दछ।
ताल बैकल क्र्याब
यो ताल बढ्छ प्रत्येक वर्ष लगभग दुई सेन्टीमिटर। टेक्टोनिक प्लेटहरूको निरन्तर चालको कारण यसले असंख्य भूकम्प निम्त्याउँछ। यो तालले प्रत्येक वर्ष बढी पानी लिन सक्छ।
बैकल तालको जिज्ञासा
त्यहाँ तालको तल एक स्टेनलेस स्टील पिरामिड रूस को हतियार को कोट संग। यो पहिलो अभियान अभियान हो जुन तालिका २ July, २०० on मा तालको तल पुग्न सफल भयो।
यो ताल पनि धेरै वर्ष अगाडि धेरै प्रख्यात भएको थियो घटनाको कारणले यसको सतहमा देखा पर्‍यो र पहिलो चोटि यसका अन्तरिक्ष यात्रीहरूले अवलोकन गरे। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (ISS)। यस घटनामा तालको सतहमा ठूलो चिन्ह रहेको थियो (जुन त्यसपछि फ्रिज गरिएको थियो) बायाँतर्फ मिल्दो मिल्दोजुल्दो छ। एक टेबलमा पानीको गिलास। यो मार्क व्यासमा करिब 4,5.। किलोमिटर थियो। अलौकिक विषयहरूलाई समर्पित व्यक्तिहरूले भने कि यो युएफओ ल्यान्डि theको अधिकारको परिणाम हुन सक्छ (क्रप सर्कलको समान तर्कको अनुसरण गर्दै)।
ताल बैकल सर्कल
अर्कोतर्फ, वैज्ञानिक समुदायले यस घटनाको केहि बढी सुसंगत विवरण दिए। यो पानीको संवाहनको कारणले अन्धकार घेरा थियो। न्यानो र कम घना पानी सतहमा उगियो र जब यसले वातावरणको चिसो सामना गर्‍यो, यो बरफको पातलो सतहमा फ्रिज भयो। सब भन्दा अन्धविश्वासीले भने कि यदि तपाइँ सर्कलको किनारमा चारैतिर घुम्नुभयो भने यो तपाइँलाई बर्मुडा त्रिकोणको घटनासँग मिल्दोजुल्दो छ भने, तालको गहिराइबाट आउने धेरै अशान्त धाराहरूद्वारा तपाईं अल्मलनुहुनेछ।
बैकल तालमा पर्यटन
बैकल तालको भ्रमण र आनंद लिन, तपाईं ट्रान्स-साइबेरियन ट्रेनमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। यो ट्रेन यसले लगभग २०० पुलहरू र 200 33 वटा सुरुnelहरू पार गर्दै यसलाई चारैतिर घेर्दछ। तालको वरपरका पसलहरूमा उनीहरूले धुम्रपान गरिएको बहुमुखी माछा बेच्छन् र सुन्दर परिदृश्य अवलोकन गर्दा तपाईं रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ।
यस तालको दक्षिणपूर्वी भाग, कुनै शंका बिना, उत्तरपूर्वी भाग व्यावहारिक रूपमा परित्याग गरिएकोले सबैभन्दा पर्यटन हो।
बैकल ताल र मौसम परिवर्तन
धेरै वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाए कि यसको प्रभावहरु मौसम परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिंग तिनीहरूले यो ताल धेरै कम रोचक बनाउन सक्नुहुन्छ। यी मध्ये एक अध्ययन पत्रिका बायोसाइन्समा प्रकाशित भयो। यस अनुसन्धानका लेखक थिए मारियान भि। मूर र नोट गर्‍यो कि तालको मौसम धेरै न्यानो भएको छ र तापक्रमको दायरा पहिलेको जस्तो चरम छैन। हिउँदमा ताल पहिले भन्दा धेरै कम जमेको छ। यस तथ्यले इकोसिस्टमलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ र सबैभन्दा कमजोर जन्तुहरू जस्ता नेर्पा मोहर। यो स्थानिक सील विश्वमा एक मात्र ताजा पानीको छाप छ र यसले केवल वैवाहिक तालको बरफमा जोडी र जन्म दिन सक्छ। यो बरफ कम समयको लागि अवस्थित हुँदा, जन्म क्षमता र अवसर धेरै कम छ, त्यसैले मोहर जनसंख्या कम हुन्छ। यसमा मानव जोडिएको छ। हो, मानव जातिको यी छापहरू चुपचाप र व्यापक रूपमा शिकार गर्नुहोस् जुन क्षेत्रको अर्थव्यवस्थाको लागि सब भन्दा ठोस आधारहरू मध्ये एक हो।
नेरपा सिललाई यसको प्रजननको लागि आइस आवश्यक छ। स्रोत: http://www.rdrusia.com/rusia-el-lago-baikal/
अन्तमा, यो तालको एक जिज्ञासा यो हो कि मात्र ठाउँ जहाँ तपाईं न्यूट्रिनो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी कणहरू हुन् जुन पृथ्वीमा विरलै पाउन सकिन्छ र हामीलाई अन्य ग्रहहरू र ग्यालेक्सीहरूको जीवन र बाह्य अन्तरिक्षमा के हुन्छ भन्ने बारेमा धेरै जानकारी प्रदान गर्दछ।
तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो ताल, सुरुदेखि अन्तसम्म, दुबै वैज्ञानिक र पर्यटकहरूका लागि अचम्मको छ। त्यसोभए तपाइँ प्याक गर्न र तपाइँको अर्को यात्राको आयोजन go मा जान सक्नुहुन्छ
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » बैकल ताल किन यति प्रसिद्ध छ?
यी क्रिसमसमा दिनको लागि उत्तम मौसम स्टेशनहरू हुन्
मौसम परिवर्तनको परिणाम स्वरूप ठूला पखेटा